Sida loo hagaajiyo qaladka Windows 0x800704ec | Madasha Mobile -ka
Cristian Garcia | 18/09/2021 19:16 | La cusbooneysiiyay 18/09/2021 19:17 | Nidaamyada hawlgalka, Windows
Ma isweydiineysaa sida loo hagaajiyo lambarka qaladka 0x800704ec oo xaggee ka timaadaa? Hagaag, waxaan haynaa xalka khaladka waxaanan kuu sharxi doonnaa halka ay ku timid guuldaradaan yar ee Windows taas oo ka dhigaysa kombiyuutarkaaga shaqsi aan la ilaalin. Waxaan yeelan doonnaa xalal kala duwan oo u shaqeeyay isticmaaleyaal badan oo ka mid ah nidaamka Windows iyo gaar ahaan Difaaca Windows.
Si aad ugu dhowaato arrinta su'aasha ku jirta, khaladka 0x800704ec waa digniin rasmi ah oo rasmi ah oo Difaacaha Windows na siinayo taasna waxay kugu dhici kartaa nooc kasta oo Windows ah markaad isku daydo inaad gasho adeegga amniga Windows, taasi waa, Difaaca Windows . Waxa inta badan dhaca waa taas sumaddu waxay isu rogtaa mugdi ama cawl waxaana furmaya daaqad khalad markaad isku daydo inaad gujiso oo furto.
1 Maxay qalad 0x800704ec u dhacdaa?
1.1 Aniga ma rakibin antivirus laakiin qaladku wuu muuqdaa
2 Isticmaal tifaftiraha diiwaanka si aad dib ugu habayso cabbirro kala duwan
3 Ka -hagaajinta nidaamka hawlgalka isla markiiba taliska
4 Tirtir ama jooji hawlgalka fayraskaaga Anti kasta nooc kasta ha ahaadee
Maxay qalad 0x800704ec u dhacdaa?
Sababta ugu badan ee looga faalloodo Internetka sababta qaladkani u dhacayo oo daaqadda ama daaqadda leh lambarka 0x800704ec ay ka muuqato Windows 10 waa sababta oo ah waxaa laga yaabaa inaad haysato barnaamij antivirus ah oo lagu rakibay kombuyuutarkaaga. Kuwa yaryar ee maqaalka akhrinaya, markii hore nidaamka Difaacaha Windows waxaa lagu magacaabi jiray Microsoft Security Essentials waana la soo degsan jiray, ma arag in lagu daray ama wax la mid ah. Waxaas oo dhami waxay dhaceen maalmihii Windows XP. Markii dambe Microsoft waxay go'aansatay inay ku darto nidaamyadooda hawlgalka ee soo socda, taas oo ah, Windows Vista iyo Windows 7.
Wax yar ayaynu hormarnay maantana sidaas ayaa la odhan karaa leh Windows 8 waxay durbadiiba noqotay barnaamij kahortag ah oo kahortag ah kuwaas oo aanad ogaan doonin joogitaankeeda ama u baahan tahay inaad soo dejiso ama wax la mid ah. Waxay si fudud ugu jirtaa gadaal waxayna socotaa adigoon dareemin inaad ilaaliso kombiyuutarkaaga.
Laakiin waxaas oo dhami waa cajiib ilaa ay ka bilaabato inay khaladaad bixiso oo waa kiiska qaladka 0x800704ec. Waxa inta badan halkan ka dhaca qaladkan ayaa ah haddii ay ogaadaan barnaamij kale oo lagu ilaaliyo PC -gaaga, taas oo ah, antivirus kale oo lagu rakibay wax kasta oo uu yahay, difaacaha cusub ee Windows wuu xiraa oo wuxuu joojiyaa shaqadiisa ilaa nidaamka qalliinka uu ogaado inaad gacanta ku xirtay ama aad ka furtay antivirus -ka. Waxaa la dhihi karaa waa xoogaa maseyr ah.
Sidaa darteed, wixii hadda ka dambeeya waxaan kaaga digaynaa taas xalka ugu weyn ee qaladka 0x800704ec waa in la tirtiro fayraskaaga, ha ahaato Avast, ha ahaato Panda, Norton ama wax kasta oo khayaano liddi ku ah. Middaas ama si toos ah u jooji isticmaalka Windows Defender. Si kastaba ha ahaatee, waxaan sii faahfaahin doonnaa xallinta khaladkan si aad u hesho beddel haddii uninstall -ka antivirus uusan shaqayn.
Aniga ma rakibin antivirus laakiin qaladku wuu muuqdaa
Waxay dhici kartaa in khaladka 0x800704ec uu soo muuqdo iyada oo aan lagu rakibin wax fayruus ah ama furin liddi ku ah kombiyuutarka. Markaa tan ayaa laga yaabaa inay sabab u tahay inaad leedahay qaabeyn khaldan oo waxyaabo kala duwan ah ama ay jiraan faylal nidaamsan oo xumaaday ama waxyeelloobay. Waxaan xitaa ka hadli karnaa farriimaha qaladka waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay xaqiiqda ah inaad haysato fayras ama furin kombiyuutarkaaga iyo in antivirus -gaaga ama Difaacaha Windows midna uusan ogaan oo xannibin. Haddii aad leedahay furin, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto qaar ka mid ah kuwan soo socda:
Kombiyuutarku si tartiib ah ayuu u shaqeeyaa
Barnaamijyada ayaa si lama filaan ah u xirma.
Ciyaaraha fiidiyaha qaarkood aad bay u socdaan.
Barnaamijyadu aad bay u socdaan
Isticmaalka CPU iyo GPU aad buu u sarreeyaa
Xayeysiisyo badan iyo soo-baxyo ayaa ka muuqda kombuyuutarkaaga
Waxay xitaa noqon kartaa inaad haysato fayras ama furin kombiyuutarkaaga oo aadan arkin mid ka mid ah astaamahan ama guuldarooyinka. Hadda waxaan la tagnaa xoogaa xal dheeri ah oo ku saabsan qaladka 0x800704ec.
Isticmaal tifaftiraha diiwaanka si aad dib ugu habayso cabbirro kala duwan
Si aad u isticmaasho tifaftiraha diiwaanka oo aad dib u habayso qaar ka mid ah xuduudaha, kaliya raac talaabooyinkan:
Barka raadinta daaqadaha waa inaad ku qortaa ereyga "Diiwaangelin" oo intaas ka dib riix furaha Enter -ka ee keyboard -kaaga. Hadda adoo adeegsanaya qeybta bidix ee daaqadda soo muuqata, meesha aad ku aragto faylalka kala duwan, sahamin oo aad 'HKey_Local_Machine \_ Software \_\_ Policies \_\_ Microsoft \_\_ Windows Defender'. Markaad hesho wadadan oo aad ku jirto, waa inaad heshaa faylka ama furaha Disable Anti -spyware qiimihiisana meesha ka saara. Sideed uga saari kartaa qiimaheeda? Waa hagaag, adigoo laba jeer gujinaya jiirkaaga REG- DWORD iyo qiimaynteeda 0.
Ka -hagaajinta nidaamka hawlgalka isla markiiba taliska
Sidii aan hore kuugu sheegnay, waxaa laga yaabaa in khaladku sabab u yahay xaqiiqda taas qaar ka mid ah feylasha nidaamka waa musuqmaasuq ama waxyeello. Taasi waa sababta aan kugula talineyno in si kasta oo aad u fuliso habsocodkan aan hoos kuugu sharxi doonno maadaama ay qaadaneyso waqti aad u yar waxaadna awoodi doontaa inaad nadiifiso nidaamka qalliinka ee faylashaas burburay. Habkan waxaad ku hubin doontaa oo ku xallin doontaa khaladaadka qaarkood oo aadan hore u aqoon. Si tan loo sameeyo, raac talaabooyinkan:
Waa inaad riixdaa furayaasha Windows + X laga bilaabo kiiboodhka oo hadda ka dooro Taliska Degdegga maamulaha. Intaas ka dib waa inaad qortaa amarka fulin doona wax kasta oo la yiraahdo sfc / scannow oo riix furaha Enter -ka ee keyboard -kaaga si aad u dhaqaajiso baaritaanka. Markaad dhammaato waa inaad qortaa amarrada soo socda oo mar labaad riix furaha Gelitaanka mid kasta: DISM. Hadda waa inaad xirtaa isla markiiba taliska waxaanan kugula talineynaa in tan ka dib aad dib u bilowdo kumbuyuutarkaaga oo aad mar kale hubiso sida ay u shaqeyso.
Tirtir ama jooji hawlgalka fayraskaaga Anti kasta nooc kasta ha ahaadee
Sidii aan hore kuugu sheegnay, malaha tan ayaa ah dhibaatada ugu weyn iyo sababta keentay qaladka 0x800704ec, markaa haddii aadan samayn, waa inaad mar hore samaysaa. Haddii uu jiro wax ka badan hal antivirus oo ku shaqeynaya kombiyuutarkaaga, tani waxay abuureysaa isku dhac dhinacyo badan ah, marka ma badbaadi doontid inaad yeelato laba barnaamij antivirus halkii aad ka ahaan lahayd mid. Waxaan ku xusuusinaynaa in Difaacaha Windows -ku uu u tirinayo inuu yahay antivirus markaa haddii aad leedahay nooc kasta oo kale oo ah (Panda, Norton, Avast…) waxay abuuri doontaa isku dhac.
Si aad u tirtirto antivirus -ka waxaad u baahan doontaa oo kaliya inaad dhex marto baarka raadinta Windows oo qor Ku dar ama ka saar Barnaamijyada, ama sidoo kale uninstall si ikhtiyaarka hore u muuqdo. Daaqaddaas gudaheeda barnaamijyada kala duwan ee la rakibay ayaa ka soo muuqan doona. Ka raadi antivirus -kaaga liiska oo guji saar si aad u sii waddo furitaankiisa.
Haddii, dhanka kale, aad rabto inaad xidho gebi ahaan isla waqtigaas laakiin aadan ka fujin, waa inaad dhex marto maareeyaha hawsha adigoo riixaya furayaasha Xakamaynta + Shift + Baxsashada. Antivirus -kaagu wuxuu ku jiri doonaa liiska hawlaha socda. Hadda guji oo sii si ay hawsha u dhammayso. Taas ka dib dib u bilow kombuyuutarkaaga. In kasta oo, sidaan sheegnay, waxaa lagugula talinayaa inaad iska furto oo aad ilaaliso Difaacaha Windows ama aad ka saarto Difaacaha Windows. Adiga ayaa dooranaya
Waxaan rajeyneynaa inaan caawinnay iyo in qaladka 0x800704ec lagu hagaajiyay PC -gaaga. Waxaan kugu arki doonaa maqaalka xiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Nidaamyada hawlgalka » Sida loo hagaajiyo qaladka Windows 0x800704ec
Adeegga SecureLine VPN wuxuu diiday faylkaaga liisanka - maxaa la sameeyaa?